Customer akatarisa basa kuwedzera ukoshi zvigadzirwa!
Service ndiwo mudzi Sine kukura. rokutengesa yedu pfungwa akamira pamwe vatengi vedu pasinei ezvinhu. Tichatonga waivako yedu zvakanaka sei isu kugutsa vatengi zvedu 'zvinodiwa totungamirirwa kudavira kuti vatengi vedu pakupedzisira kusarudza sei kubudirira isu tichava.
Pashure okutengesa basa:
The Sales vaudza vatengi mumaawa 24 pashure pakukurukura;
The Sales Achachengeta kugutsikana kuongorora kuti vatengi panguva nenguva, kuongorora uye nokupfupikisa vatengi 'zvinodiwa uye musika zvinogona zvinodiwa;
The Sales zvichaita chokutanga kuti inofambiswa kuna Quality Department pamwe rakanyorwa kamwe kutambira zvichemo vatengi 'pamusoro zvigadzirwa. Ipapo Quality Department achaita pachisara tora okugadzirisa zviito, kuronda uye zvinenge migumisiro hunotsigira uye pakupedzisira kuudza zvabuda kusvika Sales. The Sales achatuma chokuita magwaro aya uye ongororo kuti vatengi kuti avo kugutsikana chisimbiso;
Tinogona kupa zvifambiso siyana: By Air, By Sea, TNT / dhl / Ups / Fedex Express etc.
Engineering magadzirirwo zvekushandisa mhinduro:
Tine simba nemano mukugadzirwa mhinduro kunyanya Engineering uye Design. Tinosungirwa mazano uye kusimukira mabasa uye chinoramba kuvandudzika. ouinjiniya yedu mudonzvo ane mamwe makore akawanda magineti kugadzira, kuongorora, unhu vimbiso.